Olee otú otu ịkọ omume nke na ọnụego nke a cryptocurrency na okwu nke ọnụ ọgụgụ nke iwu enịm? - Blockchain News
Gịnị bụ ọdịdị nke usoro nke ịzụ ma ọ bụ na-ere a cryptocurrency na ihe online exchange?
Ka anyị kwuo na ị chọrọ ịzụ otu Bitcoin maka $9,500. Mgbe ahụ ị chọrọ iji na-ekwusa a ọchịchọ ahịa na ndị nwere ere site na-esite na iji. Na-ere ákwà na-egosi otu ụzọ site n'ịkpọsa ha chọrọ ka ha na-ere Bitcoin na a akpan akpan price. Mgbe ọchịchọ ahụ na-ere adanyekọta na ike nke ndị na-azụ, ndị azụmahịa na-akpaghị aka na-kwubiri. Otu n'usoro nke akabeghi dechara iwu ka e dekọrọ na ihe a maara dị ka akwụkwọ.
Dị ka a na-achị, na mgbanwe, na iji akwụkwọ na-dị n'ụdị a table, ebe ngwa nke na-ere ákwà na-egosi na-acha uhie uhie, na ndị na-azụ’ -arịọ na-na green. The grafụ nke table-egosi na ọnụ ọgụgụ nke ego na uru nke ha bu n'obi na-ere ma ọ bụ zụta. A na-agbasa a kpụrụ ke nkwụsị nke a tebụl, ma ọ bụ ihe dị iche na price nke ọkọnọ na ina. The ala mgbasa, ndị ọzọ mmiri mmiri na kaadị akpan owo.
Na chaatị n'elu, na convergence nke ịgba zụta na-ere iwu na-anọchi anya mgbidi na oge jikọrọ ọnụ. N'ókè nke njikota nke green na-acha uhie uhie mgbidi bụ isi nke ugbu a ọnụego nke cryptocurrency.
The iji akwụkwọ nwere naanị ịgba iwu, dị ka ahịa iwu (mere na ahịa price) na-ghọtara ozugbo, na ọ na-adịghị eme ka ọ bụla uche na-egosipụta na ha na iji akwụkwọ.
The analysis nke iji akwụkwọ bụ a na-eduga egosi ahịa ọnọdụ, dị ka ọ na-enye ohere onye amụma mgbanwe tupu ha eme. Ọ bụrụ na, ọmụmaatụ, anyị na-ahụ a nnukwu ìgwè ọnụ ekwegasịrị maka mmejuputa iwu-na elu price ịgba, anyị nwere ike ikwu na ka anya dị ka ahịa esịmde a ịgba, a ga-enwe a nlaazu iwe na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke sales.
Hà iwu ka nnukwu egwuregwu na dịkwa mkpa nke na-eme trading mkpebi, ka ha na-abụ mgbe nile kwesiri ngosi na iji akwụkwọ na ike budata ịgbanwee itinye n'ọnọdụ nke agha. Iwu na-egosi na iji akwụkwọ na-nnọọ nso ahịa ọnọdụ. Mgbe ahịa na-akpali na one direction ma ọ bụ ọzọ, ha na-wetara ndị ahịa price, agbazi ndị a mmegharị. Na oge mgbe price na-eru nso larịị nke na-eguzogide, n'ezinụlọ iwu (n'ịgbaso otu larịị) nso onye ọ bụla ọzọ na uru, na ofu na iji akwụkwọ.
Ọnụego nke a cryptocurrency
Ka 21, 2018 na 6:41 PM
Ka 22, 2018 na 5:44 PM
Ka 23, 2018 na 10:45 PM
Ka 25, 2018 na 8:56 PM
Ka 29, 2018 na 2:31 AM
June 8, 2018 na 2:36 PM
June 10, 2018 na 9:09 AM
June 13, 2018 na 8:25 AM
July 21, 2018 na 10:39 AM